शिव संकल्प print
सन्तबहादुर तामाङले ट्याक्सीचालक संघ पोखरा शाखाको चुनावमा ‘आफैं लड्ने’ अठोट गर्यो। ‘आँफै लड्ने’ भनेर किन भनेको? पाठकहरू सोध्नुहोला, यहाँको सोधार्इ जायज छ! चुनाव घोषणा भएलगत्तै जताततै चुनावी सरगर्मी बढेको थियो। नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने, को उम्मेद्वार हुने, को को मिलेर प्यानल बनाउने, कसलाई अगाडी बढाउने, कसलाई पछाडी पार्ने आदि आदि। यस्तै सरगर्मीमा सन्तबहादुरलाई पनि धेरै पक्षबाट दिउसो र साँझको चियापानमा आउन निमन्त्रणा आएको थियो। चुनावमा सघाउन अनुरोध आएको थियो। एक दुईवटा कार्यक्रममा ऊ नगएको पनि होइन तर जहाँ पनि व्यवसायको कुरा भन्दा को को आफ्ना हुन् रु तिनलाई कसरी अगाडी पार्ने र को कोलाई छिर्के हान्ने भन्ने मात्रै कुरा भए पछि उसलाई मोहभङ्ग भएको थियो। एउटा भेलामा गएपछि एकथरी साथी नबोल्ने अर्को भेलामा गएपछि अर्काथरीले गर्दन घुमाउने गरेको पनि उसलाई चित्त बुझेको थिएन। यस्तै तानातानमा परेर नै उसले चुनावमा ‘आफैं लड्ने’ निश्चय गरेको थियो।
सन्तबहादुर तामाङको घर धादिङमा पर्दथ्यो। परिवार पाल्ने पीडाले ऊ ट्याक्सी चलाउन भनेर पोखरा आएको थियो। शुरु शुरुमा राम्रै कमाइ हुन्थ्यो तर पछि कमाइ हुन छाड्यो किनभने चल्तीका चोकमा बस्न सजिलो थिएन। ठूलै भनसुन वा कमिशन लाग्दथ्यो। कपाल जगल्टा पालेर मुन्द्रा लगाएकालाई देखि कपाल सिनित्तै पारेर सुकिला कपडा लगाएका सम्मलाई नजराना दिनुपर्दथ्यो बेला बेलामा ट्याक्सीमा मिटर राख्ने लगायतका व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उठ्दथ्यो तर त्यसै सेलाउँथ्यो राम्रो अनुगमन पनि हुँदैनथ्यो। कारण प्रष्ट थियो। सम्बन्धित पक्षलाई आम्दानी भैरहेकै थियो।
सन्तबहादुरलाई यो सबै व्यवस्थित होस्, मर्यादित होस् र ट्याक्सीचालक भन्दा हेय भन्दा सम्मानित होस् जस्तो लाग्थ्यो तर ऊ एकजनाले मात्रै यसो सोचेर केहि हुने थिएन। तैपनि यी सबै कुरामा झक्झक्याउने उद्देश्यले उसले आफैंले उम्मेद्वार हुने निर्णय गरेको थियो। चुनावको प्रक्रियाको शुरुमै उसलाई समस्या पर्यो। उम्मेद्वारी दिनलाई एक जना प्रस्तावक र एकजना समर्थकको आवश्यकता पर्दो रहेछ। सन्तबहादुरको मनमा कुनै नाम आएन। उसका सबै साथीहरू कुनै न कुनै संगठनमा लागेका थिए। कसैलाई पनि भन्न सन्तबहादुरलाई मन लागेन। अन्ततः उसले एक जना बूढा चालक ओमबहादुर थकालीलाई सम्झ्यो। ओमबहादुर थकाली तिनै थिए जसले दशवर्ष पहिले सन्तबहादुर पोखरा आउँदा सहयोग गरेका थिए। धादिङको सन्तबहादुर अन्यथा पोखरामा टिक्न सक्दैनथ्यो होला। ओमबहादुरले उसको प्रस्तावक बन्न सहमति मात्रै जनाएनन् बरु ट्याक्सी चलाउन छाडेर मलेशिया जान हिँडेको आफ्नो छोरा राज गौचनलाई समर्थकमा हस्ताक्षर पनि गराइदिए। हकी स्वभावका ओमबहादुरको छोरा राज पनि सानै देखि चलाख थियो। बाह्र कक्षा सम्म राम्रै पढेको उसले क्याम्पस पढ्न भने त्यति मेहेनेत गर्न सकेन। जसो तसो बीबीएस् पास गरेर पनि उसले बाबुकै बिँडो थाम्दै ट्याक्सी चलाउन थालेको थियो भने यो पेशामा पनि धरै कमाई हुन नसकेकाले विदेश जान लागेको थियो। अब सन्तबहादुरलाई वैधानिक उम्मेद्वार बन्न कसैले छेक्न सकेन। उसको उम्मेद्वारी दर्ता भयो। सन्तबहादुर धेरै उत्साहित थियो। ‘सन्तबहादुर, तिमी धेरै साहसी र प्रष्ट विचारका रहेछौ, मलाई धेरै मन पर्यो, तिमीले माग्नै पदैन, एक भोट पक्का भयो।’ ‘हामी तिमी जस्तै उम्मेद्वारको खोजीमा थियौँ, हाम्रो खोज आज अन्त्य भयो।’ ‘तिम्रो जीत सुनिश्चित छ, तिमी जत्तिको स्वच्छ छविको उम्मेद्वार हामीले अहिलेसम्म देखेकै छैनौँ।’
उसलाई चिन्दै नचिनेकाहरू समेत आएर उसलाई बधाई दिए। उनीहरू सबैले ऊ जस्तै उम्मेद्वारको पक्षमा रहेका बताए। सन्तबहादुर उत्साहित भयो। जित्छु पो क्यारे१ ट्याक्सीचालकमा पनि यतिका स्वतन्त्र र सहृदयी मान्छे रहेछन्। उसैलाई पो थाहा रहेनछ त १ उम्मेद्वारी दर्ताको समय सकिए पछि भने सहमतिको लागि प्रयास शुरू भयो। ‘एकै व्यवसायमा रहेकाहरू बीच यसरी चुनाव गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। मनमुटाव समेत हुन्छ’
एक जना वरिष्ठले भने।
‘हो हो सहमति गर्नुपर्छ, सहमति गर्नु पर्छ’ धेरैले भने। त्यसै अनुरूप धेरै उम्मेद्वारहरूले नाम फिर्ता लिए। सन्त बहादुरलाई नाम फिर्ता गर्न अनुरोध गरियो। वास्तवमा तीन संगठनका तीन तीन सदस्यगरी नौ जना सदस्यमा सहमति गर्न सन्तबहादुरको उम्मेद्वारी बाधक बनेको थियो।
‘सन्त बहादुरजी एकजना कर्मठ चालक हुनुहुन्छ, वहाँको विचार एकदम जायज छ, वहाँको मुद्दालाई हामी अगाडी लिएर बढ्छौँ, वहाँले नाम फिर्ता लिनुहुन्छ’
एक जना वरिष्ठ चालकले भने। उनले सन्तबहादुरलाई व्यक्तिगत रूपमै पनि सम्झाए। तर सन्तबहादुर मानेन। ‘तपाईं जेलाई सहमति भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो भागबण्डा हो, सहमति नै गर्ने भए मलाई पनि राखेर सहमति गर्नुहोस्’ सन्तबहादुरले भन्यो। तर उसको कुरा कसैले सुनेन। ‘सन्तबहादुरजी, तपाईंको सदस्यता नै अवैधानिक हो। तपाईंले म्याद नाघिसकेपछि सदस्यता लिनुभएको थियो।’
अर्को संगठनका नेताले भने। कस्सो सन्तबहादुरलाई थाहा थियो कि चुनाव गराउने समिति पनि म्याद नाघेपछि गठन भएको थियो। उसले त्यो कुरा उठाए पछि ती नेता चुप लागे। ‘तिम्रो साँचो कोसँग छ मलाई थाहा छ, हामीले भन्नै पर्दैन, तिमी आफैंले नाम फिर्ता लिनेछौ।’ अर्को संगठनका नेताले कडा बोलीमा प्रष्ट्याए। व्यावसायिक हक हितका मुद्दामा यति प्रष्ट हुन नसके पनि सबै संगठनका नेताहरू सन्तबहादुरको स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुनु सांकेतिक रूपकै भए पनि सांगठनिक सिण्डिकेटको गालामा थप्पड भएको कुरामा सबै प्रष्ट थिए।
एक मन त सन्तबहादुरलाई नाम फिर्ता लिउँ लिउँ नलागेको हैन तर एक छिन सोचे पछि उसले नाम फिर्ता नलिने अठोट गर्यो। कम से कम सबै व्यवसायी त व्यवसायलाई भन्दा संगठनलाई महत्त्व दिने छैनन् भन्ने उसको सोच थियो अनि अधिवेशनको सत्रमा सबै व्यवसायीका बीच कम से कम एकपटक बोल्न त पाउँछु भन्ने उसको आशा थियो।
अधिवेशनको खुला सत्रमा नेताहरूका भाषणहरू भए, अधिकार र सुविधाका कुरा भए। विभिन्न कार्यकालमा भएका राम्रा र नराम्रा कुराका बारेमा चर्चा भए। तर सभामा उपस्थिति धेरै कम थियो। सदस्य मध्ये एक चौथाइ पनि उपस्थित थिएनन्। सन्तबहादुरले उम्मेद्वारको रूपमा आँफूले पनि पनि बोल्न पाउने आशा गरेको थियो तर उपस्थिति कम देखेर उसको उत्साह मरेर गयो। ‘अब एकछिन खाजाको समय हुनेछ त्यसपछि उम्मेद्वारहरूको मन्तव्य र अन्त्यमा चुनाव हुनेछ।’
मञ्चबाट घोषणा भयो।
सन्तबहादुरले सोच्यो ठिकै छ, भाषण त सबै आए पछि गरेकै राम्रो भोट हाल्ने बेलामा त सबै आउलान्।
तर खाजापछिको कार्यक्रम भएन। शायद कसैलाई पनि कसैको विचार वा योजना सुन्न आवश्यक नै थिएन। उनीहरु त विभिन्न ठाउँमा आ आफ्नो समूह गोलबन्द भएर कसरी मतदान गर्ने भन्नेबारे प्रशिक्षण गरीरहेका थिए। एकल संक्रमणीय प्रणालीमा वरियता अनुसार मत दिनुपर्दथ्यो। धेरै यो प्रणालीबारे अनभिज्ञ थिए। उनीहरूलाई आ आफ्नो समूहमा प्रशिक्षित गरिँदै थियो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा क कसले कसलाई कुन कुन वरियतामा मत दिने भनेर स्यास्यानो चीटमा लेखेर वितरण गरिँदै थियो। त्यहाँ विचार र व्यक्तित्व भन्दा पनि नितान्त गुटबन्दी मात्र थियो। केन्द्रबाट पर्यवेक्षकको रूपमा काठमाण्डौँका वरिष्ठ ट्याक्सीचालक धनबहादुर तामाङ आएका थिए। खाजाको समयमा सन्तबहादुरलाई धनबहादुरसँग भेट गराइयो। धनबहादुरले सन्तबहादुरलाई एकान्तमा लगेर तामाङ समुदायको सांगठनिक झुकावको बारेमा सम्झाए। सन्तबहादुरलाई उदेक लाग्यो।
सन्तबहादुरलाई एक मन त आफ्नो भाषण नभएको ठिकै लाग्यो किनकि उसको कुरा सुनेर परिवर्तित हुने कोही थिएनन् तर आफ्नो कुरा आफ्नै साथीभाईलाई भन्न नपाएको पीडा भने उसले भुल्न सकेन।
साँझ परेपछि मतदानको समय भयो। उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरू मतदानकेन्द्र बाहिर मतदाता पहिचान गर्न बसे। सन्तबहादुरको कुनै प्रतिनिधि थिएन। ऊ आँफै बस्यो। उसको गाउँले साथी हर्कबहादुरले उसलाई एकछिन पालो दियो। बिहानको कार्यक्रममा कतै देखा नपरेका मतदाताहरू खुरु खुरु आएर मतदान गर्न लागे। सन्तबहादुरले ढोकैमा उभिएर सबैलाई नमस्कार गर्यो। ‘म पनि उम्मेद्वार छु है’ भनेर उसले सबैलाई भन्यो। उसलाई सबै हँसिला लागे। उसलाई सबैले आफूप्रति प्रेम र सहानुभूति राखेजस्तो पनि लाग्यो। तर तीमध्ये सबैजसोले ककसलाई भोट दिने भनेर लेखेर दिइएको चीटलाई आ आफ्ना हातमा मचक्कै च्यापेको देख्दा यी कसैले पनि उसलाई भोट दिँदैनन् भन्ने उसले प्रष्ट थाहा पायो।
अभूतपूर्व मतदान भयो। दुर्घटनामा परेर अस्पताल भर्ना भएकाहरू पनि सलाइनको बोतल समेतै रातबिरात मगाइए। खाडीमा मजदूरी गर्दै गरेका विदामा आएकादेखि लिएर ट्याक्सी चलाउन छाडेर कुखुरा पाल्न थालेका सम्मले भोट हाले। दुई चार जना बाहेक कोही छुटेनन्। छुट्नेमा सन्तबहादुरका प्रस्तावक ओमबहादुर बुढा र उसका समर्थक तिनकै छोरा थिए। ओमबहादुर बिरामी परेर आउन सकेनन् भने तिनका छोरा विदेश उडीसकेकाले आएनन्।
मतदान सकिएपछि मध्यरातमा मतगणना प्रारम्भ भयो। मतगणनास्थलमा उम्मेद्वारलाई निषेध भनिएकाले ऊ जान पाएन। वरिष्ठ ट्याक्सीचालक रुद्रमान श्रेष्ठ उसको प्रतिनिधि बनिदिए। मतगणना सकियो। चुनावको नतीजा सार्वजनिक भयो। सन्तबहादुरले दुई मत पाएछ। ‘चुनाव लड्ने इच्छा पूरा भयो हैन सन्तबहादुर!’ उसलाई धाप मार्दै कुनैबेला ऊसँगै पृथ्वीचोकमा ट्याक्सी राख्ने बलराम न्यौपानेले भने।
रातिको एक बजे मत परिणाम घोषणा सभा शुरु भयो। जहाँ उम्मेद्वार र चुनाव समिति बाहिरका मुस्किलले एक दुई जना थिए। सबै उम्मेद्वारले पाएको मत पालैपालो घोषणा भयो। विजयी उम्मेद्वारहरू हर्षित थिए। ‘अब आजको हाम्रो ऐतिहासिक निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक बनाउन ठूलो योगदान गर्नुहुने श्रीसन्तबहादुर तामाङज्यूबाट मन्तव्य हुनेछ’ मञ्चबाट घोषणा भयो। दिनको उज्यालोमा सबैको अगाडी मौका नपाए पनि रातको अँध्यारोमा दश पन्ध्रजना अगाडी सन्तबहादुरले बोल्न पायो। ‘हामी सबै एकै व्यवसायमा रहेर पनि व्यवसाय भन्दा पनि संगठनिक प्रतिबद्धतालाई महत्त्व दिँदा रहेछौँ। सबै आफ्नो काममा यति दक्ष र एक आपसमा यति सहयोगी हुँदा हुँदै पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय भने लिन सक्दा रहेनछौँ भविष्यमा त्यो पनि सकौँ’
सन्तबहादुरले भाषण टुङ्ग्यायो। रात धेरै भैसकेकाले उसलाई नजिकै घर भएका नवनिर्वाचित सदस्य बमबहादुर थापाले आफ्नो घर सुत्न लगे। पल्टिँदै उसले सोच्यो। उसले पाएको दुई भोटमा एउटा भोट त ऊ आफ्नै थियो , तर दोस्रो भोट कसको थियो? धेरै सोच्दा पनि उसले भेउ पाएन।
शनिबार, बैशाख २, २०७४ १५:३५:२४
दिपेन्द्र झा किनमेल वाणिज्य बैंकहरुले कसरी पुर्‍याउँदैछन् चुक्ता पुँजी ?
चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट दिइने बोनस सेयरलाई समेत जोडेर यसै आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने समयसीमा छ। अर्थात ...
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग प्रदूषणरहित बनाइँदै
करिब ४० लाख पर्ने रेनोको कार नेपालमा
विजुली, व्यवस्थापन र नेतृत्वले जागेका सरकारी सिमेन्ट उद्योग
ग्लोबल भारतमा महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देबेन्द्र फडणविस चडेको हेलीकप्टर दुर्घटना
भारतमा बिहिबार दिउसो भएको हेलीकप्टर दुर्घटनामा महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देबेन्द्र फडणविस लगायत सबै जना बाँच्न सफल भएका छन्। मुख्यमन्त्री फडणविस चडेको...
एनआरएनको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भूमिका हुन्न?
बोस्टनमा श्रीमद् भागवत सप्ताहको तिब्र तयारी
नेपाली लगानी कर्ताहरू कसरी छिर्ने अमेरिकी शेयरबजारमा?
कला ट्रेलरमा यस्तो आयो सलमानको ‘ट्युबलाइट’ (भिडियो)
सलमान खानको नयाँ फिल्म ‘ट्युबलाइट’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ। यसअघि पाकिस्तानबाट भारत आएकी बालिकालाई घर फर्काउँदाको कथा बुनेर ‘बजरंगी भाइजान’ निर्देशन ग...
रेखा र आर्यनको ‘रुद्रप्रिया’को छायांकन सुरु
भारतीय गायक अभिजीतको ह्यान्डल ट्वीटरद्वारा निष्क्रिय
को हुन् बाहुबलीका डरलाग्दा भिलेन कालकेय?
डा. बिनोद कुमार साह अमेरिकामा तालिम
लोडसेडिङ अन्त्य, ओबरमा हस्ताक्षर, फास्ट ट्रयाक लगायतका राम्रा काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको छ। तिनको सह्राना गर्न कन्जुस्याईं गर्न हुँदैन। मुख्य कुरा यदि दाहालको राजीनामाभित्र कुनै भित्री खेलहरु सम्मिलित छैनन् भने उहाँको यो कदम अत्यन्त प्रशंसनीय छ। साथै दाहालले आफ्नो कद उँचो गर्ने अवसर सहर्ष सदुपयोग गर्नुभएको छ। वचनमा ढुक्क बन्न नसकिने मानिस भनेर चिनिने उहाँको छवि उजिल्याएको छ। कल्पना भट्टराई लोकप्रिय
२२ तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा
खातापाता नियन्त्रणमा, अनुसन्धान छैन
मधेसी चेली काठमाडौंबाट जनप्रतिनिधि
आयोगले भन्यो-थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन असम्भव
अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागेर आएकाले एमाले किल्ला तोडे
राजपालाई तालमेल प्रस्ताव
नयाँ सरकार ३१ जेठअघि कठिन
प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजनामा अर्थको अवरोध
बिवाहलगत्तै मण्डपमै तलाक
१२ वर्ष ४ महिनापछि सत्तारोहणको तयारीमा देउवा